Gobolka gardafuu | www.cilmi2.tk
SHABAKADA ARIMAHA JACAYLKA
Gobolka Gardafuu oo ah gobolka sagaalaad ee dowlada puntland kasoo la
sameeyay xiligii mudane faroole.
waxa uu dhacaa bariga puntland waxaana dhanka woqooyi kaxiga gacanka Cadmeed , dhanka bari waxaa kaga beegan bad weynta india , kuunfur waxaa kaxiga goboka karkaar , dhanka galbeedna waxaa kagabeegan gobolka bari .
Gobolkan ayaa ka kooban shan dagmo oo kala ah
1- Dagmada Caluula .
Cluula oo ah caasimada gobolka gardafuu kana mid ah magaalooyinka
taariikhiga ah ee somaliya. waxay dhacdaa woqooyiga gobolka gardafuu.
Cimilada dagmadan oo ah mid diiran kuna haboon in la dago.
Adeeg yada bulsho ee dagmadan ayaa ah kuwo dib u habayn lagu wado.
Waxaana muddo aan sidaas usii fogay lagaar siiyay dagmada Caluula qalab
caafimaad oo ay ugu deeqday jaaliya reer gardafuu ee dalka sweden taasi
oo ay madax ka ahayd aamino muuse jabaan.
2- DAGMADA BAARGAAL
oo ah magaalo kutaal koonfur galbeed gobolka gardafuu. Ahna magaalo dhacda badd waynta india.
cimilada baargaal ayaa ah mid aad u wanagsan xilkastana ku haboo in
lajoogo, Dagmadaan Waxaa lagu tiriyaa magaalooyin aadka u dhismaya ee puntland
sidoo kale waxa ay magaaladu haysata dhamaan adeeg yada asaasiga ee ay
bulsho u baahan tahay .
Adeega waxa barasho ee magaalada ayaa ah mid aad uu heer kiisu usareeyo
waxa ay sababtay in magaalada lagu naa nayso hoyga aqoonta puntland.
Inkasta oo aad moodo in adeegyada kale sida caafimaadka iyo kawa lamidka
ahba ay u baahan yihiin in sara u qaadis lagu sameeyo.
3- Dagmada murcanyo
Oo ah dagmo dhacda woqooyi galbeed gobolka gardafuu , waxayna kamid tahay dagmooyinka cusub ee puntland cimilada iyo adeegyada bulsho waxay kala saman tahay dogmooyinka ay isku gobolka yihiin, in kasta oo aad moodo in dadeegeeda waxbarashada ee dagmada uu aad ugu hooseeyo kuwa kale ee lajaarka ah , sidoo kale dagmadu wali kuma guulaysan in ay yeelato gole deegaan sababo jira awgood .
4- DAGMADA BAREEDA
Oo ah magaalo taariikheed kultaal waqooyi bari gobolka gardafuu kulaashana badda cas waana meeshii uu ku noolaan jiray DAAROOD ISMAACIIL oo ah aday ay ku abtir sadaan dadyow badan oo somali ah.
Cimilada magaaladan ayaa ah mid diiran oo aad u wanaagsan
Bareeda oo ka mid ah dagmooyinka cusub ee puntland waxaan lamaga caabay xiligii dawladii mudane faroole.
Dagmada ayaa haysata qaar badan oo kamid ah adeegyada bulsheed ee asaasiga ah . sidoo kale dagmadu waxa ay ku guulaysatay in ay heelato gole deegaan iy gudoomiye ay iska doortee, dhanka wax barasha dagmadaan oo lagu wado dib u habayn aad u balaaran ilaa iyo hadana waxaa laga hi galiyay dugsi H/DHEXE IYO SARE .
5- dagmada gumbax
waana dagmo kutaal koofur galbeed gobolka gardafuu , dagmadaan waxa ay haysataa qaar kamid ah adeegyada bulshada , inkasta oo ay jiraan tabasho u dhexaysa dadka reer gumbax iyo dad ay daris yihiin , taasi oo hormuud u noqotay in ay timaado kala kala shakin u dhextaal iyaga iyo dadka ku abtirsada gobolaka , waxaa hada meel fiican maraysa waan waan iyo wada hadal arintaa lagu turxaan bixinayo , dhamaana dadka reer gumbax waxa ka go’ an ilaalinata midnimada gobolka .
Godomiyihi ugu horeeyay ee gobolku yeesho waxa uu ahaa mudane CALI MIRE XUSEEN
inkasta oo uu in mudo ah kadib shaqada uu si iskiis ah uga tagay. waxaa haatan godoomiye ka ah gobolka Dr:C/QAADIR YUUSUF (IIDI) Loo lagu soo magacaabay wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland .
KHAYRAADKA GOBOLKA GARDAFUU
Gardafuu oo ah gobol haysta khayraad dabiici ah oo aad u badan Kawa biri
iyo mid baddeed intaba .
sidoo kale wax yaabaha uu gobolkaani gaarka layahay ayaa ah in uu noqday gobolka kaliya ee ay maraan laba dabood , lehna mari biyoodyo caalami ah kuwaas oo uu maro ganacsiga caalmka , waxyaaba layaabka leh ee gobolka gardafuu alle siiyay waxaa kamid ah in ay kutoolo meesha kali ee somaliya ay labada badood isugu tagaan wana meesha uu kasoo jeedo magaca gobolku.
Nolosh dad weynaha ku nool gobolkaani ayaa ah mid ku tiirsan khayraadka badeed iyo kan birri oo uu gobolku lee yahay.
like dheh page ka Qisooyin Jacayl si aad u hesho xogo badan
W/Q CILMI SICIID
One comment on “Gobolka gardafuu”
May 19, 2016 @ 4:39 pm
thank you for you helpfull information
Nalawadaag facebook ga
ciwaanada xasaasiga ah
Hadimo jacayl Qaybteedii 7-aad
SOO CELINTA CIWAADAN 2GO GA AH
Follow www.cilmi2.tk on WordPress.com
1,000,509 oo qof
REER AAKHIROOD MAXAY KA DHEHEEN GEERID ? April 22, 2016
Si degdeg ah ayaan hurdo uga toosay !! Waxaan arkay iftiin iga yaabiyey Waxan is iri iftiinka qolka ka dhex muuqda muxuu ahaa ,Waxaan arkay in ay saacaddy tahay 3 iyo bar gelinkiidambe ee habeenimo Laakiin waa yaabe waa maxay … Continue reading →
Erayo jacayl oo aad u murugo badan November 21, 2015
erayo jacayl Continue reading →
Fariimo jacayl oo qalbiga taabanaya November 1, 2015
FARIIMO JACAYL AH OO LAGU SALEEYAY DHACDOONYINKA DHABTA AH EE DHEX MARA DHALIN YARADU MARKA AY HAASAAWAHA KU JIRAAN . Jacaylku ma ahan wax ku cusub aduunka mana ahan wax lal yaabo waana shay qaali ah waxaana u malaynayaa dadka … Continue reading →
HALXIRAALE October 25, 2015
HALXIRAALE QAYTII 2 AAD Halxiraaluhu waa waxa layku xirtooo dhan , googgaalaysi ha ahaado ama gabay , amase si kaleeto ha laysugu xirto .Dadka halxiraalaha sida loo curiyo yaqaan oo maskaxdooda ka fakaraa waxa … Continue reading →
HIDAHA IYO DHAQANKA SOOMAALIDA October 25, 2015
Aqal-soomaali 1. Aqal soomaaligu muxuu ka samaysan yahay ? Dhigo Udbo Lool Kabad Alool Darmo Caws Yeel Noocyada dhigaha Dhig-dhexo Dhigo hareereed Weelka hiddaha iyo … Continue reading →
Shukaansiga dhalinyarada maantay iyo jacaylka beenta ah qaybta 1 aad October 2, 2015
Maxaa lagu gartaa jacaylka dhabta ah October 1, 2015
Naftu qaali weeyoo Qiimaha aduunyada Qof in ay jaclaatona Qaadir kaa u uumau HORDHAC Waa maxay jacayl ? Sida aynu wada ognahay jacaylku waa dareen ama rabitaan ku samaysan qofka bini aadamka ah meesha ugu horaysa oo laga dareemona … Continue reading →
Erayo jacayl September 27, 2015
Erayadaan jacay ee aad ka u macaan waxaa qoray oo qalinka u qaatay anagoo kala ah : CILMI SICIID JAAMAC , Maxamud Catoosh , Saadiq c/raxmaan Kabogasho wacan : In aan ku iloobo aad ayay u adag tahay balse in … Continue reading →
QISO JACAYL OO MURUGO BADAN September 16, 2015
Qofkasta oo dunida guudkeeda ku nool waxa uu maalin kasta arkayaa arimo uu kufarxo naftii sana hididiilo galiya , rayn rayna kureeba iyo qaar uu kanoxo oo walaac, tiiraayo iyo beer loxowsi ku beera waana sune rabbaani ah in qofkastaahi … Continue reading →
GABAY JACAYL AH September 9, 2015
Gabaygaan waxa lagu magacaabaa SAMIR OO DALQAADO waxana tiri yay abwaan lagu magacaabo CILMI SICIID isaga oo la talinaya nin ay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo C/RABI C/RAXMAAN kaasi oo ay ku dhacday qisadaan jaceyla QISO JACEYL OO XANUUN BADAN … Continue reading →
Doore ciwaanadii hore
Doore ciwaanadii hore Select Category 2go (1) 2go 4.1 and 4.5.1 (1) 3go (2) 5Go (2) all bombuz (1) Arin la yaab leh oo aynu ilownay (1) Bbm (1) cadaabul qabri (1) cilmi siciid (2) cilmi2 (1) ciwaan 2go (1) daawo qiso naxdin badan oo ku saabsan tahriibta (1) daawo qisooyin jecayl ah o dhab ah (1) download 2go (1) Dugsiga xoogaad (1) Erayo jacayl oo ku haboon in aad markasta adeegsato (1) Erayo jacayl oo murugo badan (1) fariimo jacayl (2) gabay ka hadlaya abaaraha (1) gabay kusaab san tahriibta (1) Gabay kusaabsan ama ka hadlaya nabadan (1) gardafuu (1) GEEDKA GUDDA YICIBTA (1) geedka yicibta (1) guurka & jeceylka (1) Hadimo jacayl (5) halkan ka daawo sheeko kusaabsan tahriibta (1) halxiraale (2) haweenka gobolka Gardafuu (1) Hees cusub o logu magacabo “garaad” (2) HIDAHA IYO DHAQANKA SOOMAALIDA (1) jacaylka cusub (1) jaceyl (1) LAYAABKA DUNIDAN (1) Looma dhama (4) murti (2) Qaybaha Guurka (1) qeep (1) Qiso (1) qiso jacayl o dhab ah (1) QISO JACAYL OO MURUGO BADAN (1) sidee lagu kala saraar jacaylka dhabta ah iyo kan beenta ah (1) Somalia dareen maqan iyo damac shisheeye (1) suugaanta afka somaliga (1) Uncategorized (21) URURKA SYDO (1)
Khayr ismail on Fariimo jacayl oo qalbiga…
siyad on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
iqra happy xfda ruus… on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
Zakariya Amin Warder… on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
Salmaan maxamed on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
Adna Abdihakim on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
cabdi qani on Erayo jacayl
Saadiq on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
Saadiq on Erayo jacayl oo aad u murugo…
mukhtaarlife@gmail.c… on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
shaafi aadan on Erayo jacayl oo ku haboon in a…
QAYTA KAYDKA Select Month April 2016 (1) November 2015 (2) October 2015 (4) September 2015 (4) August 2015 (4) June 2015 (2) January 2015 (2) September 2014 (6) August 2014 (14) July 2014 (4) June 2014 (1) May 2014 (3) April 2014 (11) March 2014 (20)
View cilmi.said’s profile on Facebook
View Somali Engineers Association’s profile on YouTube
Erayo jacayl oo ku haboon in aad markasta adeegsato https://cilmi2.wordpress.com/